လီဗာပူးလ်က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရာဖင်ဟာကို လိဒ်ကလိုချင်နေတဲ့ကစားသမားနဲ့ အလဲအထပ်ဖြစ်လာပါ့မလား.... - YTV Channel
Home | Sports | လီဗာပူးလ်က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရာဖင်ဟာကို လိဒ်ကလိုချင်နေတဲ့ကစားသမားနဲ့ အလဲအထပ်ဖြစ်လာပါ့မလား….
လီဗာပူးလ်က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရာဖင်ဟာကို လိဒ်ကလိုချင်နေတဲ့ကစားသမားနဲ့ အလဲအထပ်ဖြစ်လာပါ့မလား….
YTV ရဲ့အားကစားသတင်းတွေကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေကို ယခုအခါမှာတော့ လီဗာပူးလ် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ အကြောင်းလေး တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်...
လီဗာပူးလ်နည်းပြကြီး ဂျာဂျင်ကလော့ကတော့ တောင်ပံတစ်စုံကို ယခုနှစ်မှာ လက်လွှတ်လိုက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်...လီဗာပူးလ်အသင်းကနေ ဆာဒီယို မာနေးဟာ ထွက်ခွာတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကလော့အနေနဲ့ ယမန်နှစ်ရာသီမှာ လိဒ်ယူနိုက်တက်က တောင်ပံ တစ်လျှောက် တောက်ပနေခဲ့တဲ့ ရာဖင်ဟာကို ခေါ်ယူချင်နေတယ်လို့ အားကစားသတင်းတော်တော်များများကဖော်ပြနေကြပါတယ်...
ထို့အတူ လိဒ်ယူနိုက်တက်ဘက်မှလဲ လီဗာပူးလ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဂျပန်ကစားသမားလေး မီနာမီနိုနဲ့ အလဲအထပ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ Mirror Football မှထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရ သိရှိထားရပြီး ထိုကစားသမားနှစ်ဦးကလဲ ယမန်နှစ်ရာသီတစ်လျှောက် ကောင်းမွန်သော ခြေစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်...လိဒ်ယူနိုက်တက်မှ ရာဖင်ဟာ ကတော့ ယမန်နှစ်က ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ ၃၆ ပွဲမှာ ၁၁ဂိုး သွင်းယူပြီး ၃ဂိုးဖန်တီးပေးထားတဲ့ တောင်ပံကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မီနာမီနို ကတော့ ယမန်နှစ်ကမှ လီဗာပူးလ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ကစားသမားလေးဖြစ်ပြီး ကလော့ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်မှုအောက်မှာ ပုံစံကောင်းတွေပြသနေတဲ့ကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်.... မီနာမီနို ဟာဆိုရင် ယမန်နှစ်ပွဲစဥ်တွေမှာ ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ ၂၁ ပွဲကစားထားပြီး ၈ဂိုး သွင်းယူထားတဲ့ တောင်ပံကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်...
တောင်ပံကစားပုံနှင့်ပုံစံနေရာမတူညီတဲ့ ထိုနှစ်ဦးရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ နောက်လာမယ့်သတင်းတွေမှာ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု သွားရမှာပဲြဖစ်ပါတယ်...ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်လေးတွေရှိလဲဆိုတာတွေကိုတော့ အောက်ကကွန့်မန့်လေးမှာ ပြောပြပေးပါဦးနော်.......